Model Anastasiya Kvitkovová (22) ma liqi karo asalka waa celebrity xirfadle Kim Kardashianové weli loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu qurux badan oo jecel yahay dunida oo dhan. Ka dib qaabkeeda, waxay asal ahaan ka dhigtaa dumar aan tiro badaneyn. Laakiin qaabka Ruushku wuxuu leeyahay waxay leedahay dameer aad u fiican, Kimna xitaa ma gaadhin anqawga.
Miisaankayga waa la dhoofiyaa. Shaqo adag oo maalin kasta ah si muruqyadaydu ay jidhkayga ugu qabato. Dareenkaygu waa dameerka ugu quruxda badan aduunka, mana haysto hawlgallo caag ah oo aan ka duwaneyn kuwa kale. Habeenkii waxaan seexan on caloosha iyo dhigi lahaa wax aan nesplácl baadkiisa "cun leh Russia, kuwaas oo iyada profile on shabakada bulshada bilaabay in ay keenaan in dadka qaar ka mid ah.
Ruushka, si kastaba ha ahaatee, waxa uu ku adkeeyaa in uu yiraahdo waxay dhawaan noqon doonto caan ka badan Kardashian nafteeda.
Email (Baahan yahay)
Comment (baahan yahay)